फेरी घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुस् कति छ आज ? – दैनिक नेपाल न्युज
फेरी घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुस् कति छ आज ?
काठमाडौंः आज मंगलबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी महासंघले जनाए अनुसार आज पनि सुनको मूल्य तोलमा २ सय रुपैयाँले घटेको हो ।सोमबार प्रतितोला ७१ हजार पुगेको सुनको मूल्य आज भने २ सय रुपैयाँ घट्दै ७० हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जनाएको छ ।यस्तै, तेजावी सुनको मूल्य पनि आज घटेको छ ।
सोमबार प्रतितोला ७० हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको तेजावी सुन आज प्रतितोला ७० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महास.घले जनाएको छ ।चाँदीको भाऊ पनि आज घटेको छ । सोमबार ८ सय ७० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज भने प्रतितोला ८ सय ६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा ११७ उद्योग स्थापना गर्न प्रस्ताव